Uyini uzamcolo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isikhukhula eCosta Rica, ngo-Okthoba 2011
Kungenzeka uye waya endaweni lapho kwakunesikhukhula khona. Lapho ngihlala khona ngoNovemba 2013 besinomuntu obunzima bakhe budlula kakhulu lokho ebesinakho kuze kube yileso sikhathi. Umgwaqo waphenduka waba ngumfula onokujula okungaba yifidi. Kepha-ke, lokhu bekungelutho uma sikuqhathanisa nalabo abahlala ezindaweni ezishisayo, ezinjengeCosta Rica noma iHawaii, okumele bahlale ikakhulukazi, lapho kungezona nje kuphela ukuthi imigwaqo icwiliswe ngaphansi kwamanzi, kodwa nawo wonke amadolobha.
Kodwa, Uyini uzamcolo ncamashi? Futhi ziyini izimbangela zayo?
Isikhukhula asilutho ngaphandle kwamanzi ahlala ezindaweni ezomile, njengemigwaqo. Zingadalwa yizizathu ezahlukahlukene: izimvula ezinamandla, ukuncibilika, amagagasi olwandle, noma ukugcwala kwemifula.
Zenzeka ngokwemvelo emachibini nasemifuleni, lapho izikhukhula zenza umfula ugcwale khona, njengoba kwenzeka lapho sibeka ibhakede ngaphansi kompompi ovulekile. Kufika isikhathi lapho, kungenawo amandla anele okuqongelela uketshezi olungaka, kuyaphuma. Ungawubona futhi lo mkhuba ezingadini uma lina kakhulu, lapho umhlaba uphoqeleka ukuba uqukethe amanzi amaningi kangaka, ngokungabi namandla adingekayo enza ukuthi amanzi agijime ngaphezulu kuphela.
Isikhukhula eMinatitlán (Veracruz) ngo-2008
Kuyadingeka ukuthi kube nohlelo lwama-levee esimweni esifanele ukugwema ukulahleka, kepha akulula ngaso sonke isikhathi ukuthi izazi zezulu zibikezele ngokuqiniseka ukuthi kwenzeka nini ukuzamazama komhlaba noma isiphepho, okungadala izikhukhula.
Izindawo ezisengcupheni kakhulu yilezo ezihlala ngasogwini, kodwa singathinteka futhi uma sihlala eduze nemifula noma amaxhaphozi. E-United States, lapho kuba neziphepho eziyishumi ezishisayo ngonyaka, kusho iKentucky, California noma iVirginia okungaba nezikhukhula ezinkulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula » Uyini uzamcolo